Isaia 32 - Библия [Восточный Перевод 2003] - (Ис 32)
Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan'ny mpanjaka, ary ny lehibe hanaraka araka ny rariny.
Ary hisy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny ranonoram-baratra; Ho ranovelona ao amin'ny tany karankaina izy, ho alo-batolampy lehibe amin'ny tany mahana. [Na: Ary samy]
Ary tsy hikimpy ny mason'izay mahita, ary ny sofin'izay mandre dia hihaino.
Ny fon'izay maimaika hahazo fahalalana, ary ny lelan'izay mikodedidedy hahay miteny mahitsy.
Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetr'andriana, ary ny mpifetsy tsy holazaina hoe mahafoy be. [Heb. mpanankarena]
Fa ny adala mbola miteny fahadalana ihany, ary ny fony mamoron-keloka, mba hanaovany fihatsaram-belatsihy sy hitenenany hevi-diso ny amin'i Jehovah ary hanaovany izay tsy hahazoan'ny noana hanina sy izay tsy hahazoan'ny mangetaheta rano hosotroina. [Na: ratsy]
Ary ratsy ny hafetsen'ny mpifetsy; Mamoron-tsain-dratsy izy hanimbany ny ory amin'ny teny lainga, na dia miteny manan-drariny aza ny malahelo; [Heb. fiasan']
Fa ny mitoetr'andriana kosa dia mamoron-tsaina araka izay mahamendrika andriana, ary izay mahamendrika andriana no ifikirany.
[Anatra mafy tamin'ny vehivavy tao Jerosalema] Mitsangàna, ry vehivavy miadana, ka mandrenesa ny feoko; Ry zazavavy matokitoky foana, mihainoa ny teniko.
Raha afaka herintaona mahery dia ho raiki-tahotra ianareo, ry vehivavy matokitoky foana; Fa hanjahitra ny taom-piotazam-boaloboka, ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo
Mangovita, ry vehivavy miadana, mangorohoroa, ry vehivavy matokitoky foana; Endaho ny akanjonao, ka mitanjaha, ary misikìna lamba fisaonana.
Miteha-tratra izy, fa malahelo ny saha nahafinaritra sy ny voaloboka vokatra.
Ho rakotry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko, eny, na dia ny ao amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza;
Fa ho foana ny lapan'ny mpanjaka; Hitsahatra ny fihorikoriky ny tanàna; Ofela sy ny tilikambo fitazanana ho tonga naman'ny zohy ho mandrakizay, dia fikarenjen'ny boriki-dia sy fiandrasana ny andian'ny ondry aman'osy, [Na: Ny havoana]
Mandra-pandatsaka ny fanahy avy amin'ny avo ho amintsika, ka ny efitra ho tonga saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra hoheverina ho ala.
Ary hitoetra any an-efitra ny rariny, Ary ny fahamarinana honina ao amin'ny saha mahavokatra.
Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana; Ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay;
Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po;
Nefa hilatsaka ny havandra, rehefa aripaka ny ala, ary halamaka dia halamaka ny tanàna.Sambatra izay mamafy eny amoron'ny rano rehetra sady mampiriaria ny omby sy ny boriky.
Sambatra izay mamafy eny amoron'ny rano rehetra sady mampiriaria ny omby sy ny boriky.
Isaia 1 / Ис 1
Isaia 2 / Ис 2
Isaia 3 / Ис 3
Isaia 4 / Ис 4
Isaia 5 / Ис 5
Isaia 6 / Ис 6
Isaia 7 / Ис 7
Isaia 8 / Ис 8
Isaia 9 / Ис 9
Isaia 10 / Ис 10
Isaia 11 / Ис 11
Isaia 12 / Ис 12
Isaia 13 / Ис 13
Isaia 14 / Ис 14
Isaia 15 / Ис 15
Isaia 16 / Ис 16
Isaia 17 / Ис 17
Isaia 18 / Ис 18
Isaia 19 / Ис 19
Isaia 20 / Ис 20
Isaia 21 / Ис 21
Isaia 22 / Ис 22
Isaia 23 / Ис 23
Isaia 24 / Ис 24
Isaia 25 / Ис 25
Isaia 26 / Ис 26
Isaia 27 / Ис 27
Isaia 28 / Ис 28
Isaia 29 / Ис 29
Isaia 30 / Ис 30
Isaia 31 / Ис 31
Isaia 32 / Ис 32
Isaia 33 / Ис 33
Isaia 34 / Ис 34
Isaia 35 / Ис 35
Isaia 36 / Ис 36
Isaia 37 / Ис 37
Isaia 38 / Ис 38
Isaia 39 / Ис 39
Isaia 40 / Ис 40
Isaia 41 / Ис 41
Isaia 42 / Ис 42
Isaia 43 / Ис 43
Isaia 44 / Ис 44
Isaia 45 / Ис 45
Isaia 46 / Ис 46
Isaia 47 / Ис 47
Isaia 48 / Ис 48
Isaia 49 / Ис 49
Isaia 50 / Ис 50
Isaia 51 / Ис 51
Isaia 52 / Ис 52
Isaia 53 / Ис 53
Isaia 54 / Ис 54
Isaia 55 / Ис 55
Isaia 56 / Ис 56
Isaia 57 / Ис 57
Isaia 58 / Ис 58
Isaia 59 / Ис 59
Isaia 60 / Ис 60
Isaia 61 / Ис 61
Isaia 62 / Ис 62
Isaia 63 / Ис 63
Isaia 64 / Ис 64
Isaia 65 / Ис 65
Isaia 66 / Ис 66